Filazana · Oktobra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Filazana · Oktobra, 2018
Tantara mikasika ny Filazana tamin'ny Oktobra, 2018
Hevitra 29 Oktobra 2018
Namoaka dika tsy ovaina an'ilay Teny Ierana Global Voices i SJ, izay novaina anarana ho Fianianana Global Voices (dika 0.2).
Kaomity Hiarovana Ireo Bilaogera
Hevitra 25 Oktobra 2018
Nanangana watchblog vaovao i Curt Hopkins, dia ny "Committee to Protect Bloggers".
Fanamarihana ho an'ireo mpiserasera any ankoatran'ny aroafon'ny Mpamatsy Tolotra Aterineto
Mediam-bahoaka 17 Oktobra 2018
Mampahafantatra antsika ny namantsika Isaac Mao fa mety tsy azo idiran'ireo mpiserasera ao Shina ny anaran-tsehatra http://globalvoicesonline.org. Toa miasa ao Shina ny adiresinay ao Harvard - http://cyber.law.harvard.edu/globalvoices
Jeff Ooi, Mpampita an-drano mahavariana
Nanambara ny bilaoginy vaovao amin'ny teny Shinoa, 摆渡人 (amin'ny teny Anglisy: "The Ferryman" na "ilay mpampita an-drano") i Jeff Ooi androany, azo antoka fa bilaogy amin'ny teny Shinoa voalohany ao Malezia
Azia Atsimo 16 Oktobra 2018
Fampilaharana ireo Bilaogy Mpampifandray
Mediam-bahoaka 15 Oktobra 2018
Ao India atsimo aho amin'ity herinandro ity (ivelan'i Bangalore ihany), manatrika ny fihaonambe AsiaSource, fivorian'ireo ONG matihanina momba ny teknolojia avy ao Azia manodidina, izay mianatra ny fomba hanovana ny fikambanan'izy ireo ho sehatra loharanom-baovao misokatra.
Fandikan-teny, sy rohy (URL) vaovao
Azo jerena amin'ny tenim-pirenena maro ankehitriny ny teny ierana Global Voices - fanambarana ny fitsipika sy ny finoantsika fototra, niaraha-nanoratra tamin'ireo olona maro izay nanatevin-daharana antsika tamin'ny fihaonamben'ny Global Voices voalohany tamin'ny Desambra 2004.
Ampio izahay hanapa-kevitra izay ho atao fanadihadiana!
Mediam-bahoaka 14 Oktobra 2018
Feon'iza no irianao ho re ao amin'ny tranonkala Global Voices? Ampio izahay hanapa-kevitra izay ho atao fanadihadiana voalohany amin'ny fametrahana izay tianao eo amin'ny zoro fanehoan-kevitra.